कर सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि आउँदैछ ‘ट्याक्स्पर्ट’
| १५ आश्विन २०७२, शुक्रबार १५:०० , प्रकाशीत
कर भन्ने बितिकै धेरैजसोका टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ । के तपाईलाई कर सम्बन्धि समस्या छ ? कर तिर्नुपर्ने समय बिर्सिएर हैरान हुनुहुन्छ ? वा कर सम्बन्धि पछिल्लो अपडेटहरु पाईरहनुभएको छैन ? यदि त्यसो हो भने यो यो खबर तपाईलाई खुसिको खबर हुन सक्छ । अर्थात नेपाली बजारमा कर सम्बन्धि सम्पुर्ण समस्याहरु एउटै ठाँउबाट समाधान प्राप्त गर्नेगरी एउटा मोबाईल एप्स आउदैछ । प्राप्त जानकारी अनुसार हाल एन्ड्रोईड भर्सनमा तयार भएको एप्स केहि समयपछि आईओस भर्सनमा समेत आउनेछ ।
कहिले आउछ त यो एप्स ?
हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार ट्याक्सपर्ट (Taxpert) ब्राण्डमा आउन लागेको यो एप्सको सबै कार्यहरु सम्पन्न भई परिक्षणको रुपमा रहेको छ । सम्भवतः यो एप्स केहि दिन भित्रै सर्बसाधारणको लागि ‘प्लेस्टोर’मा राखिनेछ ।
के छन त बिशेषता ?
यो एप्सबाट तपाईको कर सम्बन्धि जिज्ञासाहरुको बिशेषज्ञ समाधान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, त्यस्तै कर गणना, टिडिएसको गणना, कर सम्बन्धि निर्देशन, परिपत्र, ऐन, नियम तथा कर कार्यालयले जारी गरेको सुचनाहरु पनि यो एप्सबाट तपाईले चाहेको समयमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । त्यस्तै तपाईको कुनै पनि ब्यक्तिगत कर सम्बन्धि समस्याको समाधानका लागि यहि एप्स मार्फत नै कर बिशेषज्ञसँग सम्पर्क गर्न सक्ने सुबिधा समेत मिलाईएको छ । ट्याक्सपर्ट (TAXpert) सम्बन्धि पछिल्ला अपडेटहरु https://www.facebook.com/NepalTaxExpert मा प्राप्त गर्नसक्नुहुन्छ ।